Talooyin ku Saabsan Naqshadda Muuqaalka laga bilaabo Semptarka
Waxaan ku noolnahay adduun muuqaal ah, muhiimadda muuqaalka sawir-qaadida lama tirtiri karo. Sawirro tayo sare leh ayaa website-kaaga ka dhigaya mid aad u xiiso badan isla markaasana baabuur badan oo waddooyinka ah. Iyadoo aan laheyn maaddo sax ah iyo ujeedo muuqaal, waxaa laga yaabaa inaadan waligaa helin natiijooyinkii la rabay. Soo-helidda muuqaalku waxay faa'iido badan u leedahay siyaabo badan, tusaale ahaan, waxay bixisaa waayo-aragnimo aad u fiican, waxay ku sii socotaa wakhti go'an oo boggaaga ah waxayna bixisaa fursado heer sare ah. Tiknoolojiga raadinta muuqaalku wuxuu sameeyay dabeecado caan ah bilihii la soo dhaafay, iyo mashiinnada raadinta ma tilmaami karaan content ee sawirrada. Marka, waxay ku xiran yihiin qoraalka sawiradaada si aad u fahamtid waxa sawiradu ku saabsan yihiin iyo sida ay ula xiriiraan mowduucyada ama maqaallada - blue barstool chairs. Halkan waxaa ku qoran talooyinka wax soo saarka muuqaalka ah ee loogu talagalay webmasters iyo bloggers ay bixiso Max Max, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt .
Sawirada muuqaalka kama caawin karaan SEO:
Haddii aad rabto in sawirradaada ay ku soo galaan bogga internetka, waa inaad marin u hesho sawirrada kaydka. Laakiin muuqaalada sawiradu kama caawin karaan SEO sababtoo ah waa inaad sii wadataa bogga bogga iyo bogga-off-SEO-si gooni gooni ah. Meelo badan oo ka mid ah goobaha waxaa lagu dhuftey sawirro isku mid ah, sidaas darteed waa inaad ka fekertaa sawirada gaarka ah iyo rafcaanka aan waligood la isticmaalin. Xitaa marka sawirada saadaasha la soo-gooyo, waxay yeelan doonaan saameyn isku mid ah ama faa'iidooyinka SEO sida sawirada asalka ah.
Isticmaal sawirro tayo sare leh:
Waa muhiim in la isticmaalo sawirro khaas ah oo tayo sare leh dhammaan maqaalladaada. Sawirada cusub ee la isticmaalo ee aad isticmaashid, ayaa aad u fiican inaad ka mid noqotid maaddooyinka raadinta..Sawirada asalka ah waxaa loola jeedaa inaad isticmaasho sawirada aan copyright-ka lahayn Haddii aadan helin Shutterstock ama Getty Images, waxaad ku qaadan kartaa sawirada gurigaaga adoo isticmaalaya kamarad. Bixiya martidaada macluumaad fara badan oo ku saabsan astaantaada, taas oo suurtagal ah oo keliya sawirro muuqaal iyo sawiro muuqaal ah.
Bixi macaamiishaada si aad u aragto shirkaddaada, ama sameyso sawir tayo sare leh oo martidaada ay ka jawaabi doonaan.
Isticmaalayaal badan ayaa iska indha tiraya sawirrada. Sawirada asalka ah ee asalka ah ayaa kuu oggolaanaya inaad ku istaagto natiijooyinka raadinta, tusi shakhsigaaga shakhsi ahaaneed iyo inaad soo jiidato dad badan oo ku jira boggaaga.
Iska ilaali sawirada:
Iyadoo aan loo eegin sawirka aad dooratay, waa inaad hubisaa in sawiradu ay xor u yihiin inay isticmaalaan, mana jiraan khilaafaadka xuquuqda lahaanshaha. Haddii aad haysatid Shutterstock, Sawirada Getty, DepositFiles ama goobaha kale ee la midka ah, waxaad isticmaali kartaa sawirro badan sida aad rabto adoon walwal gelin khilaafka xuquuqda daabacaadda. Laakiin haddii aadan haysan liisamada si aad u isticmaasho sawiradooda, markaa waa inaad la kulantaa dacwad qaali ah. Marka la eego DMCA (Digital Millennium Copyright Act), dadka isticmaala ma isticmaali karaan sheekada iyo sawirada qofka maadaama ay jebin karto arimaha xuquuqda lahaanshaha.
JPEG waa kan ugu fiican:
Waxaa jira qaabab muuqaal oo kala duwan, laakiin JPEG waa qaabka ugu wanaagsan ee loo adeegsado sawirka. Waxay bixisaa fursado badan oo lagu ilaalinayo tayada sawiradaada marka dib loo sawiro ama la cadaadiyo. Waxaad ku ciyaari kartaa midabada, qaababka, iyo hoosaadka si aad u hubiso in sawirka kama dambaysta ah uu yahay qaabka boggaaga iyo content. Waa run in sawirada JPEG ay fududahay in la foorarsado, waxaana loo isticmaali karaa labadaba yar iyo weynba.
Marka ay timaaddo SEO, waxaa muhiim ah in magacaaga lagu magacaabo. Waa inaad sameysaa magacyo gaaban oo wakhti kooban oo sawiradaada ah aadna hubisid in ereyga muhiimka ah lagu daro magacyadaas. Google, Yahoo, iyo Bing waxay si sahal ah u tarjumayaan mawduucaaga iyo sawiradaada haddii ereyada iyo odhaahda si sax ah loo isticmaalo.